Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Liverpool Iyo Brigton | Raadgoob
Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Liverpool Iyo Brigton
Liverpool ayaa guusheedii labaad oo xidhiidh ah iyada oo marti ah soo gadhay iyada oo 5-1 ku soo xasuuqday kooxda Brighton wuxuuna ahaa kulan ay jamaahiirta Reds si wayn nugu raaxaysteen. Kadib markii ay Reds 3-0 ku soo garaacday kooxda Stoke City isla markaana uu Jurgen Klopp shaxdiisa isbadal ku sameyey ayuu markale awooday in iyada oo Sadio Mane iyo Joel Matip ayna kulankan ciyaarin ay kooxdiisu soo gaadhay guul wayn.
Klopp ayaa wada qorshe uu ciyaartoyda kooxdiisa ku maamulayo waqtiga mashquulka badan isaga oo maanka ku haya in haddii uu ciyaartoy waqti badan soo safo in ay dhibaato u keeni karto kulamada soo badan ee soo socda wuxuuna gabi ahaanba kaydka kaga tagay Sadio Mane halka Matip uu dhaawac ku seegay kulankan.
Emre Can ayaa shaqo wayn ka qabtay difaaca dhexe oo uu Lovern kala ciyaarayay wuxuuna xidiga ree Germany ahaa ninkii goolka furitaanka u saxiixay Reds laakiin Roberto Firmino oo si wayn uga faa’iidaystay hal abuurka Mohamed Salah iyo Philippe Coutinho ayaa laba gool kulankan ka dhaliyay.
Mohamed Salah ayaa noqday xidigii abid ugu horeeyay ee Liverpool ka soo ciyaaray ee 15 kii kulan ee Premier Leaque ugu horeeyay ku soo lug lahaaday 15 gool waana 12 gool oo uu soo dhaliyay 3 gool caawin uu sameeyay. Laakiin Coutinho oo kulankan wacdaro ka dhigay ayaa ku lug lahaa afar gool oo ka mid ah shanta gool ee ay Reds soo dhalisay kulankan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku haynaa qiimayntii ciyaartoyda labada kooxood ee kulankan iyo waliba xidigii garoonka ugu fiicnaa: